နာရေး လမ်းကြောင်း လိုက်ပို့ရင်း ကားငါးစီးဆင့် တိုက်တဲ့ အထဲပါပြီး အက်ဆီဒင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျော်သူ – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရဟိတ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ ကတော့ သူ့ဘဝရဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အချိန် အများစုမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေနဲ့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရင်း ကုန်လွန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူက အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိနေပြီဆိုပေမယ့် လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း လူငယ်တွေနဲ့အပြိုင် ပရဟိတအလုပ်တွေ စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကလည်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ကျော်သူက နာရေးကူညီမှုအသင်း ကားကို မောင်းရင်းနဲ့ ကားငါးစီးဆင့်တိုက်ပြီး အက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ကားငါးစီးဆင့်ကာ ဆင့်ကာတိုက်သော်ငြား… ဘာမှ မပူပါနဲ့။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရား နှလုံးသား မှာရှိတယ်။ ဘုန်းဘုန်း ဘုရား လည်မှာဆွဲထားတယ်။ ယနေ့ နာရေးကူညီမှုလမ်းကြောင်း ရေဝေးသုဿန်သို့ အသွား လမ်းတစ်နေရာရှိဖြတ်လမ်းရှိ သောနေရာတွင် ပင်မကားများရှင်းပါက
တစ်ဖက်လမ်းသို့ ကူးရန်အတွက် တန်းစီစောင့်နေသော ကားလေးတစ်စီးနှင့် လိုက်ထရပ်ကား အား နောက်မှ အဝေးပြေးခရီးသယ်တင်ကား တစ်စီးမှ တိုက်လိုက်၍ရှေ့ဆုံးတွင်ရပ် နေသော ကားမှာတစ်ဆင့်ချင်းတိုက်ခံရပြီး ကျွန်တော်မောင်းလာသည့် နာရေးနိဗ္ဗာန်ယာဉ်အား ရှေ့ဘေးမှ ဆောင့်တိုက် လိုက်၍ မိမိမှရှောင်လိုက် သော်လည်း မိမိ၏ ညာဖက်ရှိ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး၏ နောက်ပိုင်းဘေးဖက် ကိုမိမိမှတစ်ဆင့်တိုက်မိတော့သည်။ လူများဘာမျှမဖြစ်သော်လည်း တိုက်ခံရသည့်ကားငယ်(ရှေ့/နောက်)၊ လိုက်ထရပ်(ရှေ့/နောက်)၊ နာကူယာဉ် ရှေ့(ဘယ်/ညာ) ၊ဘတ်စ်ကားကြီး(နောက်ဖက်ဘယ်ဖက်ခြမ်း ပွန်း)အသီးသီးထိသွားခဲ့သည်။ ကားငါးစီးဆင့်ကာ ဆင့်ကာတိုက်ခံရသည့်ဖြစ်ရပ်ပင်ဖြစ်တော့သည်။”
“မိမိမှ လမ်းမှန်၊ပုံမှန် မောင်းသော်ငြား တစ်ဖက်မှ အန္တရာယ်သည် မည်ကဲ့သို့လာ မည်ကို အထူး သတိထားရန် အသိတရားတစ်ခု ရှိခဲ့ရသည်။ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပေါ် ပါလာသော ဘဝကူးသွားသည့် ရုပ်ခန္ဓာအား အသင်းမှ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် တစ်စီးအား အမြန်ခေါ်၍ ဘော်ဒီအားပြောင်းရွှေ့ကာ ရေဝေးသုဿန်သို့ပို့ဆောင် သင်္ဂြိုလ်ပေးမှုအား တာဝန်မပျက်၊တာဝန်ကြေစွာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ အသင်းသို့ ပြန်အရောက် သုခဆေးခန်းမှတာဝန်ရှိသူများမှ အတင်းခေါ်ဆောင်၍ မိမိအား အာထရာဆောင်းစက်ဖြင့် မိမိ၏နှလုံးအားစစ်ဆေးပါတော့သည်။ သွေးပေါင်ချိန်ဖြင့်ချိန်ပါတော့သည်။ ဘာမှမဖြစ်။ ဘာမှမတွေ့။ မိမိတွင် ဗုဒ္ဓရှိနေသည်။ ဘုန်းဘုန်းရှိနေသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ မော်တော်ကား၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊လမ်းလျှောက်သည့် နေ့စဉ် လုပ်ရပ်များတွင် မိမိသည် …. ဘယ်လောက်မှန်မှန်၊ ဘယ်လောက်ဖြေးဖြေး၊ ဘယ်လောက်သတိထားထား တစ်ဖက်မှ အန္တရာယ်သည်အချိန်မရွေး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်သည်ကိုတော့ သိထားသင့်တော့သည်။” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ကျော်သူ ကတော့ ကားငါးစီးကြီးတောင် ဆင့်တိုက်တဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ ရပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်ပဲ ပွန်းရာပဲ့ရာလေး တောင် မရှိတာ သူပြုသမျှ ကုသိုလ်အကျိုးဆက် တွေကြောင့်ဆိုတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါဘူး။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ဦးကျော်သူတစ်ယောက် အသက်ရှည်ကျန်းမာပြီး အများအကျိုးကို ဆက်လက် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နာရေး လမျးကွောငျး လိုကျပို့ရငျး ကားငါးစီးဆငျ့ တိုကျတဲ့ အထဲပါပွီး အကျဆီဒငျ့ ဖွဈခဲ့တဲ့ ကြျောသူ
ပရိသတျကွီးရေ ပရဟိတ မငျးသားကွီး ဦးကြျောသူ ကတော့ သူ့ဘဝရဲ့ ဖွတျသနျးလာခဲ့တဲ့ အခြိနျ အမြားစုမှာ အနုပညာ အလုပျတှနေဲ့ အမြားအကြိုးကို သယျပိုးဆောငျရှကျရငျး ကုနျလှနျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကြျောသူက အသကျအရှယျတဈခုရောကျရှိနပွေီဆိုပမေယျ့ လကျရှိ ကိုဗဈကာလမှာလညျး လူငယျတှနေဲ့အပွိုငျ ပရဟိတအလုပျတှေ စှမျးစှမျးတမံလုပျကိုငျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးအတှငျးကလညျး ကိုဗဈပိုးကူးစကျခံရတဲ့အထိ ဖွဈခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး ကြျောသူက နာရေးကူညီမှုအသငျး ကားကို မောငျးရငျးနဲ့ ကားငါးစီးဆငျ့တိုကျပွီး အကျဆီဒငျ့ဖွဈခဲ့ရကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ကားငါးစီးဆငျ့ကာ ဆငျ့ကာတိုကျသျောငွား… ဘာမှ မပူပါနဲ့။ ဘာမှ မဖွဈဘူး။ ဗုဒ်ဓဘုရား နှလုံးသား မှာရှိတယျ။ ဘုနျးဘုနျး ဘုရား လညျမှာဆှဲထားတယျ။ ယနေ့ နာရေးကူညီမှုလမျးကွောငျး ရဝေေးသုဿနျသို့ အသှား လမျးတဈနရောရှိဖွတျလမျးရှိ သောနရောတှငျ ပငျမကားမြားရှငျးပါက
တဈဖကျလမျးသို့ ကူးရနျအတှကျ တနျးစီစောငျ့နသေော ကားလေးတဈစီးနှငျ့ လိုကျထရပျကား အား နောကျမှ အဝေးပွေးခရီးသယျတငျကား တဈစီးမှ တိုကျလိုကျ၍ရှဆေုံ့းတှငျရပျ နသေော ကားမှာတဈဆငျ့ခငျြးတိုကျခံရပွီး ကြှနျတျောမောငျးလာသညျ့ နာရေးနိဗ်ဗာနျယာဉျအား ရှဘေ့ေးမှ ဆောငျ့တိုကျ လိုကျ၍ မိမိမှရှောငျလိုကျ သျောလညျး မိမိ၏ ညာဖကျရှိ ဘတျဈကားတဈစီး၏ နောကျပိုငျးဘေးဖကျ ကိုမိမိမှတဈဆငျ့တိုကျမိတော့သညျ။ လူမြားဘာမြှမဖွဈသျောလညျး တိုကျခံရသညျ့ကားငယျ(ရှေ့/နောကျ)၊ လိုကျထရပျ(ရှေ့/နောကျ)၊ နာကူယာဉျ ရှေ့(ဘယျ/ညာ) ၊ဘတျဈကားကွီး(နောကျဖကျဘယျဖကျခွမျး ပှနျး)အသီးသီးထိသှားခဲ့သညျ။ ကားငါးစီးဆငျ့ကာ ဆငျ့ကာတိုကျခံရသညျ့ဖွဈရပျပငျဖွဈတော့သညျ။”
“မိမိမှ လမျးမှနျ၊ပုံမှနျ မောငျးသျောငွား တဈဖကျမှ အန်တရာယျသညျ မညျကဲ့သို့လာ မညျကို အထူး သတိထားရနျ အသိတရားတဈခု ရှိခဲ့ရသညျ။ နိဗ်ဗာနျယာဉျပျေါ ပါလာသော ဘဝကူးသှားသညျ့ ရုပျခန်ဓာအား အသငျးမှ နိဗ်ဗာနျယာဉျ တဈစီးအား အမွနျချေါ၍ ဘျောဒီအားပွောငျးရှကေ့ာ ရဝေေးသုဿနျသို့ပို့ဆောငျ သင်ျဂွိုလျပေးမှုအား တာဝနျမပကျြ၊တာဝနျကွစှော လုပျဆောငျပေးခဲ့ပါသညျ။ အသငျးသို့ ပွနျအရောကျ သုခဆေးခနျးမှတာဝနျရှိသူမြားမှ အတငျးချေါဆောငျ၍ မိမိအား အာထရာဆောငျးစကျဖွငျ့ မိမိ၏နှလုံးအားစဈဆေးပါတော့သညျ။ သှေးပေါငျခြိနျဖွငျ့ခြိနျပါတော့သညျ။ ဘာမှမဖွဈ။ ဘာမှမတှေ့။ မိမိတှငျ ဗုဒ်ဓရှိနသေညျ။ ဘုနျးဘုနျးရှိနသေညျ။ မညျသို့ဖွဈစေ မျောတျောကား၊ဆိုငျကယျ၊စကျဘီး၊လမျးလြှောကျသညျ့ နစေ့ဉျ လုပျရပျမြားတှငျ မိမိသညျ …. ဘယျလောကျမှနျမှနျ၊ ဘယျလောကျဖွေးဖွေး၊ ဘယျလောကျသတိထားထား တဈဖကျမှ အန်တရာယျသညျအခြိနျမရှေး ထိပျတိုကျရငျဆိုငျနိုငျသညျကိုတော့ သိထားသငျ့တော့သညျ။” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
ကြျောသူ ကတော့ ကားငါးစီးကွီးတောငျ ဆငျ့တိုကျတဲ့ အန်တရာယျနဲ့ ကွုံဆုံခဲ့ ရပမေယျ့ ဘာမှမဖွဈပဲ ပှနျးရာပဲ့ရာလေး တောငျ မရှိတာ သူပွုသမြှ ကုသိုလျအကြိုးဆကျ တှကွေောငျ့ဆိုတာ ယုံမှားဖှယျမရှိပါဘူး။ စိတျထားကောငျးတဲ့ ဦးကြျောသူတဈယောကျ အသကျရှညျကနျြးမာပွီး အမြားအကြိုးကို ဆကျလကျ သယျပိုးဆောငျရှကျနိုငျပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။